IiHacks zokugqibela ze-Oasis 🥇 Cheats, Aimbot, ESP, Wallhack-Gamepron
OASIS IMIQATHANGO EBALULEKILEYO
Fumana ukufikelela kuzo zonke ii-Oasis Hacks ezilungileyo apha kwiGamepron! Sinikezela nge-Oasis Aimbot, i-ESP / iWall Hack, iNoRecoil, nokunye okuninzi! Phumelela ngakumbi ngezixhobo ezikhoyo apha.
Nceda uqaphele: Ngaphambi kokuba uthenge ii-Oasis hacks zethu, qiniseka ukuba isixhobo ojonge ukusithenga sihlaziyiwe kutshanje okanye sisekwi-intanethi. Ngelixa sihlala sihlaziya izixhobo zethu, kukho ukulibaziseka ngexesha lokuhambisa kwezinye iimeko; Ngelixa ihlala ikhawuleza, inokuthatha iiyure ezimbalwa. Zonke izixhobo zethu zitshixiwe nge-HWID, oko kuthetha ukuba ungazisebenzisa kwikhompyuter enye-qiniseka ukuba ikhompyuter yakho iyahambelana nazo zonke izixhobo zethu kwangaphambi koko. Akukho mbuyiselo iya kunikwa wakube UKUJONGE isitshixo semveliso!
Onyuliweyo wethu Oasis Hacks
Ii-Oasis Hacks, i-Aimbot, i-Norecoil, i-ESP, iiWall Hacks kunye nokunye
Thenga Oasis IiHacks ngaphakathi 4 amanyathelo
Khetha umdlalo ongathanda ukuthenga iihacks kukhetho lwethu olubanzi lwezihloko
Khetha i-hack ehambelana neemfuno zakho ngokugqibeleleyo, njengoko sinezinto ezininzi ezahlukeneyo ekufuneka sizithathele ingqalelo
Yenza intlawulo yakho usebenzisa ukubakho kwethu kuphela (kwaye sikhuseleke ngokumangalisayo!) Inkqubo yokuhlawula evela kwiGamepron.
Ukufumana ukufikelela kwiqhosha lakho kunye nokukhuphela ii-Oasis Hacks!
Fumana ukufikelela kwisitshixo sakho semveliso kwaye ukhuphele ii-hacks ozifuna ukhuphiswano!
Kutheni usebenzisa i-Gamepron Oasis Hacks?
Imidlalo yokusinda yenzelwe ukuvavanya amandla akho kunye namandla-akho, kwaye i-Oasis yokugqibela ayifani. Ukusebenzisa ii-Oasis Hacks zethu kuyakwenza ukuba inkqubo yokuphila iphile lula, kodwa njani? Zininzi izoyikiso zokukhathazeka malunga nokudlala, kwaye nokuba uza kuhamba wedwa okanye unamaqabane ambalwa, amathuba okuba uza kufumana umceli mngeni kungekudala. Nge-PvP (Umdlali ngokuchasene noMdlali) ukuba yinxalenye ebalulekileyo yalo mdlalo, uya kufuna isibonelelo xa kunokwenzeka. Xa udibana nabadlali "abalola amakrele abo" iinyanga, kuvakala ngathi awunathemba. Xa abadlali abangenathemba bevula i-Oasis yokugqibela, bafumana imvakalelo eyoyikisayo enokoyiswa kuphela ngokusebenzisa ii-Oasis Hacks zethu! Sinokukunceda ukuba ufikelele kwezona ndawo zibalaseleyo ze-Oasis Hacks ezikhoyo kwimarike, konke ekufuneka ukwenzile kukuthenga isitshixo semveliso kwiGamepron.
Asiyi kuhla ngendlela yemveli uninzi lwabaphuhlisi bokungena kuyo iba lixhoba kuyo. Bafuna ukukhupha izixhobo ngokukhawuleza, ukuguqula inzuzo kwinkqubo -I-Gamepron ijolise ngakumbi ekwenzeni izixhobo zepremiyamu eziza kuma kuvavanyo lwexesha. Ukuba ufuna ukwazi ukuba imali yakho ichithwa kwindawo elungileyo, ukuthenga zonke iihacks zakho ukusuka apha eGamepron kuya kuyigcina ingqondo yakho inoxolo.
Ngaba ukhe wasebenzisa isixhobo sasimahla kwi-Oasis yokugqibela? Nokuba ibingomnye umdlalo, izixhobo zasimahla azinakuthelekiswa namandla anamava apha eGamepron. Zonke izinto esizibandakanyileyo kwi-Oasis Hack yethu bezenzelwe ukuba ziphumelele ngokulula, nokuba ungangumdlali onobuchule kangakanani. Umntwana omncinci angahlala phambi kwekhompyuter yakho kunye nee-Oasis Hacks zethu ezenziweyo kwaye enze umonakalo, siyathembisa! Lowo ngumnqophiso nje wokuba zingaba namandla kangakanani izixhobo esizenzayo.
Ngoku ukuba uyawuqonda umgangatho ekufuneka siwenzile, ulinde ntoni? Thenga imveliso ephambili namhlanje kwaye ufumane ukufikelela kuyo ngaphandle kwamathandabuzo ezona Oasis Cheats kwiwebhu! Sikulungele ukunceda nabani na ofuna uncedo, nokuba ujonge ukukhahlela okokuqala. Akukho lucalucalulo luqhubekayo apha, njengoko sikwazi ukunceda abadlali kuwo onke amanqanaba ezakhono- xa uziva ngathi lixesha lokucela uncedo, khumbula nje iGamepron lukhetho # 1 kwi-intanethi.
Ulwazi lweOasis Player ESP (Igama, imivalo yezeMpilo, umgama)
Into ye-Oasis ESP eneefilitha
Imo yeOasis super jump (akukho monakalo wokuwa xa uyenzileyo).
Ithambo le-Oasis kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa.
Ukubuyiselwa kwakhona kweOasis
Ngokufanelekileyo Oasis yimfumba Iimbonakalo
Sebenzisa iOasis Player yethu i-ESP ukufumana inzuzo enkulu ngexesha ledabi le-PvP, njengoko uhlala ubona iimodeli zotshaba ngomphezulu oqinileyo / opaque
Ayizukukwazi ukubona iimodeli zomdlali kwiindonga kuphela, kodwa unokubona ulwazi oluluncedo (njengamagama abo, impilo, kunye nomgama).
Kumdlalo wokusinda njengokuphanga i-Oasis kubalulekile, yiyo loo nto ukusebenzisa into yethu ESP ngezihluzi ukufumana izinto ezilungileyo kufanelekile.
Injongo yakho iya kubulala nanini na xa ukhetha ukusebenzisa i-Oasis Aimbot yethu! Imipu iya kuphumelela ngokukhawuleza.
Umkhondo we-Oasis Bullet (osebenzayo kwimigama emifutshane naphakathi)
Ukugqibelela kokubini okufutshane kunye nokuphakathi komgama, ungasebenzisa inqaku leOasis Bullet Track ukugcina umkhondo weefoto zakho.
Inqaku lesilumkiso liya kukwazisa xa utshaba lusondele kufutshane okanye lujolise kuwe usebenzisa umyalezo wesiko esikrinini.
Imowudi ye-Oasis super jump (akukho monakalo wokuwa xa uyenzileyo)
Ukufa kumonakalo wokuwa yinto yexesha elidlulileyo xa usebenzisa iGamepron. Nika amandla imowudi yokutsiba ephezulu kwaye uthathe ukubhabha, kuba umonakalo wokuwa uphelile.
Ithambo le-Oasis kunye nenjongo ephambili enokuqwalaselwa
I-Oasis Aimbot ixhotywe ngeendlela ezahlukeneyo ezinokulungiswa, ezinje ngokuBekwa phambili kwamathambo kunye nezinye ezininzi.
Iitsheki ezibonakalayo ze-Oasis aimbot
Sebenzisa iOasis Aimbot yethu kuya kukuvumela ukuba usebenzise umsebenzi wokuKhangela okuBonakalayo ukuze ubone apho ukubetha kwakho kubetha khona kumchasi.
Sebenzisa i-Recoil Compensator efumaneka kwi-Oasis Hack yethu ukuthintela ubukho obucaphukisayo bokuphinda ubuye ngexesha lomlo wakho omkhulu.
Yiba ngoyena mdlali weyona midlalo mhle kwiOasis kwiPlanethi
Kuthatha uhlobo olwahlukileyo lomdlali weqonga ukuya kwi-Oasis ngaphandle kwaso nasiphi na isixhobo, kuba iya kuba yinto yokugungxula ingqondo enokonakaliswa ziintlungu kunye neetrolls ngephanyazo. Nokuba ufuna ukuba yila troll okanye uhambise okusesikweni okukhawulezileyo kuxhomekeke kumdlali, kodwa yazi nje iGamepron inayo yonke i-Oasis Hacks ekufuneka uyenzile nokuba yeyiphi. Yiba ngowona mdlali ubalaseleyo we-Oasis okhe waba ne-Oasis cheats yethu!
I-Oasis Hacks edumileyo kunye nokukhohlisa
I-Oasis ESP kunye neWallhack
Ezinye ii-Oasis Hacks kunye nokukhohlisa
I-Gamepron inikezelwe ukuzisa abasebenzisi bethu ii-Oasis Hacks ezifanelekileyo nezisebenzayo ezikhoyo kwi-intanethi, njengoko besinokwenza esinye isixhobo esikhutshiweyo. Oku kuthetha ukuba uya kuba nethuba lokuxhamla kwezona ndawo zidumileyo ze-Oasis Hacks kunye nokukhohlisa ngokuthenga isitshixo semveliso ngqo kwiGamepron. Nokuba siphucula izixhobo okanye sinxibelelana nomnye wabalingane bethu abaqinisekisiweyo kunye nabangqinisisiweyo, uya kuhlala unikwa ukufikelela kwii-Oasis Hacks eziphambili ezifumaneka kwiwebhu. Sifake i-Oasis Aimbot apha kwiGamepron ekuvumela ukuba ujolise kwiindawo ezithile zomchasi wakho ngokuBekwa phambili kwamathambo, okanye ubatshabalalise usebenzisa ukubulala kwangoko.
Olunye uhlengahlengiso lweempawu ezinokuthi luqwalaselwe iya kuba yiNyawo kunye nokhetho loMonakalo oPhezulu, zombini eziya kuthi zenze umkhondo kunye nokubulala iintshaba zakho zibethwe ngumoya. Ukuba ufuna ukuqhubela phambili kwaye uphile ixesha elide e-Oasis, izibonelelo zezixhobo zethu kufuneka zibonakale.
Ngokuqinisekileyo uya kuba ngcono xa unayo i-Oasis Aimbot yenziwe, ininzi into esinokuyiqinisekisa. Ayisiyiyo kuphela ukuba ube yinkosi ye-Oasis ngokufumana ukufikelela kuthi, kodwa ungakwenza oko ngaphandle kokukhathazeka - ngekhe uphinde ufe ngexesha lomlo kwakhona xa iOasis Aimbot yethu yenziwe. Ngokubekwa phambili kwamathambo kukuvumela ukuba ukhombe apho ufuna ukudubula khona kunye neAuto-Aim / yoMlilo uyikhathalele le nkqubo, konke omele ukwenze kukuhlala phantsi uphumle. I-Oasis Aimbot iya kukwenzela wonke umsebenzi, kwaye ukuba ayivakali ngathi “iyonwabisa”, zininzi izinto onokukhetha kuzo ezinokutshintshwa zikunike elona thuba libalaseleyo.
Sebenzisa iOasis Aimbot yethu kuya kukuvumela ukuba usebenzise into ebulala kwangoko, eya kubulala nawuphina umntu ojolise kuye kwangoko. Awuyi kubanika nethuba lokuzikhusela, elilungele wena-oko kuthetha ukuba amathuba okuphumelela aphezulu kakhulu
Sinikezela nge-Oasis ESP ekumgangatho ophezulu kakhulu kunye neWall Hack apha kwiGamepron, kwaye kungenxa yokuba kufuneka ube nelona thuba likhulu kunokwenzeka kumdlalo wokuphila wolu hlobo. Abachasi bakho baya kwenza konke abanako ukuya phambili, okubandakanya ukusebenzisa i-Oasis ESP kunye nezixhobo zeWall Hack ukufumana apho uzifihle khona. Buyela umva nge-Oasis ESP yakho eluncedo! Ungawabona amathambo omdlali ngeendonga, kodwa kukho ubuninzi bezinye iindlela ze-ESP (ukuqonda okungaphezulu kokuqonda) onokukhetha kuzo. Uyabona igama lomdlali, kunye nokuba bangakanani na impilo esele kuye kunye nokude kwabo! Sebenzisa i-Item ESP ngesihluzi kukuvumela ukuba uphange ngokungxama, njengoko unokubona ukuba ziphi na izinto ezilungileyo ngokusebenzisa izixhobo zethu. Akukho sidingo sokuchitha ixesha elininzi ukhetha i-junk engenamsebenzi, njengoko i-Oasis ESP yethu iza kukukhomba kwicala elifanelekileyo.
Enye into engummangaliso uninzi lwee-Oasis Hacks ezingazalisekisiyo iya kuba ziimpawu zeNyawo. Ungasebenzisa inqaku leNyawo ukugcina umkhondo weentshaba ezikufutshane nawe, zikunike ithuba lokuzimela ezithunzini kwaye uqhankqalaze xa ixesha lilungile. Ukucwangcisa i-ambush kunye nokuseta imigibe enokubakho kulula xa unemikhondo ekhokelela kutshaba, oku kuya kungqamana kuyinyani ngokukodwa ukuba unawo umgama osemva nawo. Awuzukugculela kuphela abachasi, kodwa uya kwazi ukuba bakufutshane kangakanani ngaphezulu koko! Njengoko igama beliza kuphakamisa, inqaku lethu loMonakalo oPhezulu lilungile kwabo bangafuni ukuzonwabisa ngexesha lokulwa kompu. Yonke into oyithathayo iya kuba namandla ngakumbi kunabachasi bakho, nokuba bazisebenzisa ziphi na izixhobo.
Ungadlala indima yombulali we-bonafide ngeFootprint, ukonakaliswa okuphezulu, kunye neempawu zomgama ezenzelwe- ke ulinde ntoni?
Zininzi ezinye izinto ekufuneka uziqwalasele xa kuziwa kwii-Oasis Hacks zethu kunye nokukhohlisa, zonke ezi ziya kukunceda ube ngumdlali ongcono. Ngelixa abanye abantu benokwala ukuzisebenzisela ukukopela, ungabanyanzela ukuba bangenise! Ngawo onke amanqaku amangalisayo esithethe ngawo ukuza kuthi ga ngoku, kusekho ukuthanda kwe-2D Radar kunye noMsebenzi wesilumkiso ekufuneka siwuqwalasele- ngokungathi oko kwakungonelanga, sikwanendlela yokutsiba Super eya kukunceda. thintela ukonakala kokuwa (nokuba uphakame kangakanani). Awufuni ukuba yonke inkqubela-phambili yakho ilahleke ngenxa yehack-quality esemgangathweni enganikeliyo ngokuchasene nokukopela nokuba yeyiphi enye into ekhoyo apha kwiGamepron.
Zonke izixhobo zethu ziipesenti ezingama-100 ezingafumanekiyo, oko kuthetha ukuba awunakukhathazeka malunga nokuvalwa kweeakhawunti zakho. Abagculeli banokulindela ukujongana nokuvalwa ngokusisigxina ngaxa lithile xa bekopa, kodwa hayi ngeGamepron!
Ii-Oasis Hacks imibuzo
Kutheni ii-Oasis Hacks zethu
Xa uthenga ii-Oasis Hacks kwiGamepron awuzukunikwa isixhobo sokusilela, njengoko sihlala sigxile kumgangatho wokukhutshwa konke. Sinikezela iihacks ezibonisa ngokupheleleyo eziza kukunceda uphumelele kwimidlalo emininzi, nokuba unobuchule kangakanani-yiyo loo nto kufuneka ubeke ukholo lwakho kwii-Oasis Hacks zethu! Le yinkonzo ifumaneka kuphela, ngokunjalo yenza ngokukhawuleza.
Kutheni iOasis Aimbot yethu
I-Oasis luhlobo lomdlalo oluya kuthi luvuze igalelo lomsebenzisi kwiimeko ezininzi, lokwenza ukuchaneka kwakho kube sisiqwenga esibaluleke kakhulu sephazili. Awuyi kuphoswa yenye into xa sele unikwe amandla i-Oasis Aimbot, kwaye oko kuya kuguqula kube yimpumelelo enkulu ngelixa udlala umdlalo (ngokungathi oko bekungabonakali). Imipu ayisekho ekuphembeleleni uxinzelelo, njengoko sele uyazi ukuba uya kuphumelela.
Kutheni i-Oasis ESP yethu
I-Oasis ngumdlalo osindayo oya kuthi ubize ukuba uphange ngaxa lithile, oko kuthetha ukuba kuya kubakho izinto ezininzi "ezingafunekiyo" ekufuneka uzithathele ingqalelo. Ukuba ufuna kuphela ukugxila kwelona qhinga libalaseleyo, ungasebenzisa iOasis Item ESP yethu kunye neefilitha zokujonga kwizakhiwo kwangaphambili - ukugcina iitoni zexesha kwinkqubo.
Kutheni iOasis Wallhack yethu
Ii-Oasis Hacks ziya kwahluka kumgangatho, kodwa hayi ngeGamepron. I-Oasis Wall Hack yethu iya kwezemidlalo ikumgangatho ofanayo ofumaneka kuzo zonke izixhobo zethu ze-Oasis, oko kuthetha ukuba uya kuba nakho ukuzibona zombini izoyikiso kunye nezinto eziluncedo ngokungxama. Sukuyishiya ibe sethubeni lokusebenzisa iOasis Wall yeHack ukuze ubone ukuba kwelinye icala!
Kutheni iOasis Norecoil yethu
Yonke imbumbulu ibalwa kumdlalo ofana ne-Oasis, yiyo loo nto ukusebenzisa i-Oasis NoRecoil Hack yethu kuya kukusebenzela. Sebenzisa esi sixhobo kukuvumela ukuba ube nefoto echanekileyo ngakumbi, oko kuthetha ukuba iintshaba azizukuma ethubeni xa zizaku-toe-toe nawe. Xa ufuna ukunyanzela ukuthanda kwakho ebantwini, inqaku le-Oasis NoRecoil yeyona ndlela ilungileyo yokwenza oko.
Ungazikhuphela njani ezona hacks zibalaseleyo zeOasis?
Zonke ezona ndawo zibalaseleyo ze-Oasis Hacks zinokukhutshelwa kanye apha kwiGamepron. Nje ukuba uhlawule isitshixo semveliso yakho, inokusetyenziselwa ukufikelela kwii-Oasis Hacks zethu (kuxhomekeke kwinto oyithengayo). Ungafikelela kuzo zonke iihacks ezilungileyo njenge-Oasis Aimbot, i-ESP, iWall Hack, kunye neNoRecoil usebenzisa i-Gamepron.
Kutheni le nto ii-Oasis hacks zakho zibiza kakhulu kunezinye
Isibhakabhaka ngumda xa ukhetha ukugcoba ngeGamepron, njengoko ii-Oasis Hacks zethu zingenakuthelekiswa xa kufikwa kumgangatho. Zonke izixhobo zethu ziboniswe ngokupheleleyo kwaye zihlala zi-100% zingafunyanwa ngelixa zisetyenziswa, ke zonke iiakhawunti zakho zikhuselekile kuthi! Inkonzo yethu inikezelwa ngesiseko esikhawulezileyo nanjengoko kukho inani elingqongqo leendawo ezikhoyo zokukopela.
Akunyanzelekanga ukuba ulume ngaphezulu kunokuba unokuhlafuna usebenzisa i-Gamepron, njengoko sinikezela ngezitshixo zemveliso mihla le, ngeveki, nangenyanga. Ukungafani kwezinto licandelo eliphambili lenkonzo yethu apha, yiyo loo nto abasebenzisi benomdla wokubuyela kuthi kuzo zonke iimfuno zabo ze-Oasis Hack! Unako ukufikelela okungenamkhawulo ekuqhekezeni ngelixa imveliso yakho isebenza, ngoko zive ukhululekile ukuba uqhekeze kangangoko ufuna.
Kuhle Oasis yimfumba Iimbonakalo